YEYINTNGE(CANADA): Friday, October 15
အလွမ်းများနှင့် ဧရာဝတီ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား
place password... irrawaddy
(နာဂစ်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ဇာတ်လမ်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး) ၁နာရီ၄၀မိနစ်ကြာပါသည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 10/15/20100အကြံပြုခြင်း
15 Oct 2010 ဒိုင်ယာရီ
15 Oct Yeyintnge's Diary
ဧရာဝတီ Saturday, October 16, 2010 အင်တာဗျူး
NDF ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးခင်မောင်ဆွေကို ၎င်းပါတီ ရုံးချုပ်တွင် အမေရိကန် လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ ကာ့တ်ကမ်းဘဲလ်နှင့် တွေ့ဆုံအပြီးတွင်တွေ့ရစဉ်
ဖြေ။ ။ ပြည်သူတွေကို စောင့်ကြည့်တော့ နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ သင်္ကေတတွေတော့ တွေ့ရတာပဲလေ။ မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ မဲလိမ်မှုမရှိဘူး၊ လွတ်လပ်စွာ မဲပေးခွင့်ရှိမယ်၊ လွတ်လပ်စွာ မဲ ရေတွက်ခွင့် ရှိမယ်ဆိုရင် နိုင်ချေ များပါတယ်။http://www.irrawaddy.org/bur/index.php/interview/4-interview/4314---ndf--
NLD နှင့် တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ ရွေးကောက်ပွဲ သဘောထား ဆွေးနွေး
မင်းနိုင်သူ Friday, October 15, 2010
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးအေးသာအောင်တို့ ဦးဆောင်၍ ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် NLDပါတီနှင့် တိုင်းရင်းသားများ၏ သဘောထားကို ယနေ့ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် ဆွေးနွေးကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
“မနေ့ညက မိုးညှင်းမြို့နယ်က ဦးဖေစိန်အိမ်မှာ အင်းတော်၊ ကသာ၊ ဗန်းမော်စတဲ့ ၄ မြို့နယ်က အဖွဲ့ဝင် ၁၀၀ လောက်နဲ့ ဆွေးနွေးတယ်။ နောက် ကချင်ပြည်နယ် စည်းရုံးရေးမှူး ဦးတင်ဝယ် နေအိမ်မှာလည်း ဆွေးနွေးပွဲ ထပ်လုပ်တယ်။ အဲဒီမှာ အဖွဲ့ဝင် ၄၀၀ လောက်အထိ တက်တယ်” ဟု NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးအုံးကြိုင်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
မိုးညှင်းမြို့နယ်တွင် ဦးအုံးကြိုင်က “NLD ပိုမိုကျစ်လျစ်ခိုင်မာရေးနှင့် ရွေးကောက်ပွဲသပိတ်”၊ ဦးအေးသာအောင်က “အဖွဲ့ချုပ် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တိုင်းရင်းသားများ ပိုမိုသွေးစည်းညီညွတ်ရေး”၊ ဗဟိုအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် ဒေါ်အေးအေးမာက “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လူထုသို့ မှာကြားချက်များ”၊ ဗဟိုဦးစီးကော်မတီဝင် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်က “ရွေးကောက်ပွဲနှင့် NDF အကြောင်း”၊ ဗဟိုလူငယ်တာဝန်ခံ ကိုမျိုးညွန့်က “ရွေးကောက်ပွဲသပိတ်နှင့် လူငယ်တာဝန်” စသည့် ခေါင်းစဉ်များဖြင့် ဟောပြော ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဦးအုံးကြိုင်က “ဦးတင်ဝယ်အိမ်မှာ ပါတီဝင်မဟုတ်တဲ့ ကချင်လူငယ်တွေလည်း လာရောက်နားထောင် ဆွေးနွေးကြတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲသပိတ်နဲ့ ပါတီ ပိုမိုကျစ်လျစ် ခိုင်မာရေးဆိုတဲ့ အပေါ်ကို ဒေသခံပါတီဝင်တွေ တက်တက်ကြွကြွ ပြန်လှန် ဆွေးနွေးကြတယ်” ဟု ပြောသည်။
ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် NLD ဗဟိုအဖွဲ့ဝင်များ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်သို့ ရောက်ရှိကြပြီး NLD အဖွဲ့ဝင် ဒေါ်ငွေကြိုင်အိမ်တွင် ဒေသခံပါတီဝင်များနှင့် ဆွေးနွေးနေကြကြောင်း၊ ကချင်တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်း ရှိ မရှိကိုမူ မသိနိုင်သေးကြောင်း ဦးအုံးကြိုင်က ဆက်လက်ပြောသည်။
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ NLD သည် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပါတီထပ်မံ မှတ်ပုံမတင်ရန် မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့က ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။
ထို့နောက် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က NLD အပါအဝင် နိုင်ငံရေးပါတီ ၁၀ ပါတီကို တရားဝင် ရပ်တည်ခွင့် မရှိတော့ကြောင်း စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်တွင် စစ်အစိုးရပိုင် မီဒီယာများမှတဆင့် ကြေညာခဲ့သည်။
သို့သော် NLD ပါတီက ယင်းသို့ ပယ်ဖျက်ခြင်းသည် ဥပဒေနှင့် မညီကြောင်း တုံ့ပြန်ခဲ့ပြီး တရားရုံးချုပ် (ရန်ကုန်) သို့ ပါတီ ဆက်လက်ရပ်တည်ခွင့်အတွက် တင်ပြခဲ့ရာ ယခုလ ၅ ရက်နေ့တွင် တရားရုံးချုပ်က လက်ခံခဲ့သည်။
ပါတီဆက်လက်ရပ်တည်ခွင့်အတွက် ဥပဒေကြောင်းအရ ဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်း ပါတီသည် တရားဝင် ဆက်လက် ရပ်တည်ခွင့်ရှိဆဲဖြစ်ကြောင်း ပါတီပြောခွင့်ရ ရှေ့နေကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းက သတင်းဌာနများသို့ ယမန်နေ့က ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဇာနည်မာန် Friday, October 15, 2010
ကျေးလက်ရောက် ကာတွန်းဟန်လေး၏ လက်ရာတချို့ (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
written by thiri, October 16, 2010
အားပေးပါတယ်။ မှုတ်ဆေးနဲ့ စာရေးတာတွေထက် ပိုပြီး ထိရောက်တဲ့ လုပ်ဆောင်မှုပါ။ ဟန်လေး ရဲ့ ကာတွန်းတွေက ဘယ်လို လူတန်းစားမဆို နားလည်ခံစားနိုင်တယ်လေ။ ရန်ကုန် နဲ့ မန်းတ လေးလို မြို့ကြီးတွေ နဲ့ ရုံးဝန် ထမ်းတွေဆီ ကိုပါ
အဲဒီကာ တွန်းတွေ ဖြန့်သ င့်ပါတယ်။ စာတ စ်ပိုဒ်ထက် ကာတွန်း တစ်ကွက်က ပို ထိရောက် လို့ပါ။
Artist Pe Nyunt Way' solo show at Suvannabhumi Gallery
Mobile : 66 810315309
116, Chareonrat Road T. Watgate, A. Muang Chiang Mai 50000, Thailand.
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ မှတ်စုများ (၁)
Let Me Say What I See 87
Invitation Dama Talk
NLD နှင့် တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ ရွေးကောက်ပ...
Artist Pe Nyunt Way' solo show at Suvannabhumi Gal...